डिभी भर्नुभयो? नभरेको भए आफै भर्नुस्, ठगीबाट जोगिनुस् - Everest Dainik - News from Nepal
डिभी भर्नुभयो? नभरेको भए आफै भर्नुस्, ठगीबाट जोगिनुस्
काठमाडौंः अमेरिका जाने सजिलो उपायका रुपमा हरेक बर्ष डिभी भर्नेहरुको संख्या हजारौं हुन्छ। कतिपयले डिभी फर्म आफैं भर्छन भने कतिपयले विभिन्न पसलहरुबाट भर्ने गरेको पाइन्छ। कार्तिक १९ गते मंगलबार राति १०ः४५ बजेसम्म डिभी भर्न पाइन्छ ।
अन्तिम मिनेटमा डिभी भरे पनि फरक पर्दैन । किनकि यो चिठ्ठा हो । सबै आवेदकलाई कम्प्युटरले एउटै मान्यता दिन्छ र चिठ्ठामा समावेश गर्छ ।
याे पनि पढ्नुस रोकिएन मेनपावरको ठगी, मंसिरमा मात्र ५ करोड ठगी
थुप्रै त्यस्ता पसलले विगतमा यतिधेरै डिभी पर्यो भनेर प्रचार पनि गरिरहेका छन् । त्यतिमात्र हैन अमेरिकाले घरमै बसेर निःशुल्क भर्न सकिने डिभीमा भइरहेको ठगीमा नफस्न आग्रह गरिरहेको छ ।
याे पनि पढ्नुस किसानबाट कराेडाैं ठग्ने सुदखाेर सामन्त श्याम प्रदेशी पक्राउ
त्यस्ता पसले भने फोटो निःशुल्क दिने नाममा महंगोमा डिभी भराइरहेका छन् । त्यसैगरी घरका अरु सदस्यको पनि एकैसाथ भर्ने भए डिस्काउन्ट दिने लोभ पनि त्यस्ता पसलेले दिइरहेका छन् ।
ट्याग्स: अमेरिकी दुतावास, ठगी, डिभी